हाइवे: जेलिएको बिम्ब | bagar
श्रृङ्खलाविन्दु (Point of series)
Lenin on Twitter
@sarosegc @Shnkhe हामीले नि प्रयास गर्दा भएन । International रूपमै चल्ने कार्ड खोज्दो रहेछ, आफूसँग नाइ 😩 17 hours ago
@yrlamsal Hahahahaha 😂😂😂 1 day ago
@indradhoj कन्ट्रोल कान्छा !!2days ago
आफू कोइलाको तेत्तीस प्रतिशतजति कालो भएर होला— क्रोयसियाको समर्थन गरे पनि फ्रान्सले जित्दा मन दुखेन 😬 कालेहरू देख्… twitter.com/i/web/status/1…2days ago
आज @RaameshKoirala सँग बसेर फाइनल हेर्नुपर्ने रै’छ । कतिखेर मुटु फुट्छ भन्ने ठेगान भएन 😩 #CRO2days ago
Posted: July 21, 2012 in Movie
‘हाइवे’ लाई फगत ‘राम्रो’ या ‘नराम्रो’ भनेर दुई लाइनमा अर्थ्याउन र बुझाउन सकिन्न ! दुवै उत्तरका उस्तै दमदार तर्क छन् ! परम्परागत मसला (गीत, द्वन्द्व, नृत्य, बदला)बाट एक तह माथि उक्लिएर क्लाइमेक्सलाई दर्शकको जिम्मामा छाड्नु नेपाली चलचित्र उद्योगका लागि ‘प्रयोग’ हो !
‘हाइवे’ धेरै कुरामा सबल छ ! टुक्रे कथाहरू जस्ता भए पनि तिनको प्रस्तुति र पात्रहरूको मनोदशा सजीव उतार्न सक्नु यसको उन्नत पक्ष हो ! हरेक पात्रको वरिपरि घुम्ने धेरै कथा र सहपात्र विम्बात्मक छन्, सबैको उत्तर दर्शक आफैंले खोज्नुपर्छ। चिच्याएर नबोले पनि दर्शकले हरेक पात्रको मनोदशा बुझ्छन् र कतिकतिखेर ‘कठै’ भन्छन् ।
चिकित्सक र असफल पतिको रूपमा रवीन्द्र मिश्रको कथालाई जसरी तन्काइएको छ, त्यो राजमार्गको बन्दमा फसेकी बूढी महिला (सासू)सँगको सम्बन्धसँग अभ्यस्त देखिँदैन । कथाको धेरै अंश उनको पारिवारिक असफलता वरिपरि घुमेको छ । उनकी सासूको अनुहारमा त्योबिघ्न चिन्ता र तनाव उतार्न सकिएको छैन ।
राजमार्गको मूल कथाबाट फिल्म पत्ताएको छ। बन्द, हड्ताललाई जीवन्त बनाउन सकिएको छैन । यात्रुले बन्दभन्दा व्यक्तिगत कारणले दुःख पाएको देखाइएको छ । ‘हाइवे’ को मूल कथा राजमार्गका दुःखकष्ट र अप्ठ्याराभन्दा पात्रका दैनन्दिन जीवनका समस्यासँग बढी जेलिएको छ, बन्द त सामान्य परिघटनाजस्तो मात्र देखिन्छ । बन्द संस्कृतिले आमनागरिकले कुन तहसम्मको समस्या झेलेका छन् भन्ने विषयबाट फिल्म बरालिएको छ । बसका पात्रभन्दा उनीहरूलाई पर्खी बस्ने काठमाडौंका पात्रको दबदबा छ । फिल्मका मूल पात्र को हुन्, ठम्याउन सकिँदैन । तर केही स्थापित ‘स्टार’हरूलाई केमियो रोलमा झैं बाँध्नु निर्देशकीय उत्कृष्टता हो ।
९० मिनेटभित्र अनेक कथालाई सूत्रबद्ध गरेर दर्शकलाई बाँधिराख्न सक्नु ‘हाइवे’को सबल पक्ष हो । तर, हाइवेलाई ९० मिनेटभित्रै सम्याउन जसरी भरमग्दुर प्रयास गरिएको छ, त्यो न्यायोचित देखिँदैन । कम्तीमा अरू ३० मिनेट पटकथामा खेल्न सकिने प्रशस्त ठाउँ छन् । सबैभन्दा मुख्य कुरो, हरेक यात्रुसँगै उनीहरूका समस्याले पनि यात्रा गर्छन्, ‘हाइवे’ले यही बताउँछ ।
Rabi Raj Baral (@rabirajbaral) says:
फिल्म हेर्न पाइएको छैन । फिल्म हेर्नेहरुका समीक्षा अनुभाव पढ्दा हेर्नैपर्ने भो भन्ने चाहीँ लागेको छ ।
PAGALBASTI (@iPagalbasti) says:
हेरम कि नहेरम भो रिभ्यु पढेर। न हेर्नु भनेर लेख्या छ; न नहेर्नु भनेर। उपाय, पहिला आफु एक्लै गएर सब भन्दा सस्तो हलको थर्ड क्लास को टिकटमा हेर्छु। मन पर्‌यो भने अनि बल्ल सपरिवार मल्टिप्लेक्समा जानु पर्ला।
हाहा ! पहिलो लाइनमै प्रष्ट छ त कुरा :))
दाइ समिक्षा निस्पक्ष लाग्यो फिल्म हेर्न नपाए पनि दाइ को समिक्षा ले बुझ्ने मौका पाइयो तेस्को लागि धन्यवाद
hi, I stayed in Singapore for almostamonth and I have to leave before my 1-month end going to Dubai holdingabusiness visa. do you have any idea wh Click https://twitter.com/moooker1